Fako am-paosy, fametahana fako am-paosy, fonosana fonosana - Dingtian
Tiantai Dingtian Packaging Co., Ltd. dia orinasa matihanina izay manome fitaovana famahan-gazety vita amin'ny pulp vita amin'ny volon'ondry avo lenta, mitambatra amin'ny serivisy famolavolana tsara, serivisy fanodinana masinina, famokarana betsaka ary serivisy lojika.
Niorina tamin'ny 2014, ny orinasa dia miorina ao amin'ny distrikan'i Tiantai, faritanin'i Zhejiang, toerana mahafinaritra 5A nasionaly miaraka amin'ny toerana mahafinaritra. Ankehitriny ny orinasanay dia mihoatra ny 6500 metatra toradroa ary manana mpiasa mihoatra ny 100. Tao anatin'izay 6 taona lasa izay, nihaona tamin'ny filan'ny mpanjifa hatrany izahay miaraka amin'ny vokatra tsara sy ny teknolojia ary ny serivisy aorian'ny fivarotana. Ankehitriny izahay dia lasa orinasa mpamokatra fibre ambaratonga lehibe, maoderina ary matihanina manana endrika tsara.
Box Cosmetic MF
Ny famokarana Pulp bobongolo ankapobeny dia misy fanomanana pulp, famolavolana, fanamainana, fanerena mafana ary fomba hafa. 1. Fanomanana pulp Anisan'ny dingana telo amin'ny dredging, pulping ary pulping materialy ny dingana telo. Voalohany, ny fibre voalohany dia dredged ao amin'ny pulp aorian'ny fisavana sy ny classifi ...
Fako Pulp voaoloko, Boaty fonosana sakafo, Vata famonosana sakafo haingana, Taratasy fametahana kilasy sakafo, Ireo karazan-doko rehetra famonoana pulp Holder, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana,